hoo!haa!! – Page 13 –
Ebe ana-ebe akwa na agwọ tagburu mmadụ, ngwere na-apịkwa eze ya n’ike n’ike. Ka aka na-ebe akwa ndi ụkọchukwu abụọ ndi oji egbe aga gbagburu n’isi nsoa na steeti Benue, ndi amakekwu ji egbe, awakpokwala ụlọ akwụkwọ ndi ụka katọlik bụ mahadum Karitas dị na Bwari Abụja. Ndi oji egbeRead More →
LEKWA M, LEKWA MKPIRISI AKA M, LEKWA DI M ỌMA!
Na mba Zimbabwe, ka otu nwoke kachiri obi were ọdị ya n’obi gbaa akwụkwọ na-agbanyeghị na agụ iyi atabiela otu aka nwanyị ahụ. Agbara akwụkwọa n’ụlọ ọgwụ bụ ebe ana-agwọ nke nwanyị Nke nwoke bụ Jamie Fox gwara ndi nta akụkọ na ha nọrọ n’ime otu izu ụka nweta akpataRead More →
NDI IKE EBURULA ỤGBỌALA BISHỌP
Ndi oji egbe ezu, amabeghị ndi ha bụ, nọrọ n’ụbọchị ụka gara aga nọchie bishọp ndi ụka Anglikan, dayọsis nke Makọdi, bụ Rt. Rev. N. N. Inyom ma buru ụgbọala ya. Nkea mere ka nnukwu ụkọchukwua gafechara obodo ana-akpọ Gondozua, n’okporo ụzọ gawara Zaki-Biam. Ọbụ n’ihe dịka mgbe ọ fọrọRead More →
ONYE NTỌRỊ MMADỤ BỤ EVANS KPỌRỌ EKWO NKỤ…
Nwoke ahụ nwere ego na-esi isi ma bụrụkwa dike-na-ajị na ịtọrọ ndi mmadụ kpara ndi mmadụ ụka ọchị n’ụlọ ikpe dị na Legọs n’ụtụtụ tata. Nwa-amadịa bụ Chukwudumeme Ọnwụamadike eji Evans mara jụrụ jụwa isi ịrịtu n’ụgbọala ndi nga eji buru ya bịa ụlọ ikpe. Nwokea ana-ebo ebuboo ịtọrọ ndiRead More →
Eze ndi Awụsa bi na Makọdị bụ Alaaji Bello Sallau Abdurrahman etoola aka na-achị steeti Benue bụ Samuel Ortom maka nnleta iti aka n’obi ọbiara leta ha maka nwakpo ọgụ abiara wakpo ha n’izu gara aga. Mgbe Alaaji Abdurrahman na ndi nta akụkọ na-akparịta ụbụbọ, ka ọ yọrọ aka ahụRead More →
MADỤRead More →
ANWỤCHIELA NDI NCHỊ EHI BU NGWA AGHA…
Ndi agha, ngalaba nke akpọrọ guards Brigade nọrọ ụnyahụ gosi ọhaneze ndi nchị ehi dị iri atọ na isii n’ọnụ ọgụgụ, bụ ndi nke ha jidere n’okporo ụzọ si Abuja gawa Keffi n’ụbọchị ụka gara aga. N’otu aka ahụ, anwụchikwara ndi nchị ehi di iri ise na isii n’ebe akpọrọRead More →
Otù ụmụ amala Biafra bụ Indigenous People of Biafra, IPOB, n’aha nkenke enyela iwu ka onye ọbụla nọrọ na be ya n’akụkụ ala Igbo niile ma ọnwa ise n’afọa bụ ọnwa Mee dị n’abalị iri atọ. Nkea bụ maka iji cheta ma kwanyere ndi Igbo niile egburu mgbe alụrụ aghaRead More →
N’ihi na-akwụghị ndi nkuzi ụgwọ ọnwa ha, emechiela ụlọ akwụkwọ nta nakwa nke secondary niile dị na steeti Abia. Ndi nkuzi na steeti ahụ na-ebe akwa arịrị maka na-agbanyeghị enyem aka niile ha si na mba ofesi enweta, tinyere nke gọmenti etiti na-enye, biakwa gbakwunyere ya ego mmachi akpa kwaRead More →
Onye ahọpụtara ka ọ chịa obodo ahụ kwụrụ onwe ya bụ Ozalla/Obogidi (autonomous community), dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Nsukka bụ Nnukwu Ichie Asadu Samuel Ikechukwu ebunyela ndi nche agbata-obi, nke Edem Ani ụgbọ-ala ọrụ nche, iji nye aka maka ikwalute ọrụ nche obodo ahụ. Ichie Asadu eji Okenwa ỌgadagidiRead More →
BUHARI ATỤKWALA OGBUNIGWE ỌZỌ
N’izu ole m’ole gara aga ka onye isi ala bụ Muhammadu Buhari nọrọ na Lọndọn kwue na ụmụ ntorọbia ndi ala anyị bụ ndi ume ngwụ. Okwua onye isi ala kwuru mgbe ọ gara nzukọ ndi mba Common Wealth na Lọndọn ka ọnwa anọ n’afọa dị n’abalị iri na asatọRead More →
POPE EKWUELA OKWU GBASARA IHE NA-EME NA STEETI BENUE
Pope Francis akatọọla ogbugbu ahụ egburu ndi ụkọchukwu na steeti Benue. N’ụbọchị ụka gara aga ka Pope Francis nọrọ n’ogige St. Peter’s Square dị na Rome kwue okwu megide nwakpo awakporo ndi ụka ma gbukwa mmadụ iri na asaa tinyekwara ndi ụkọchukwu abụọ. Pope kpere ekpere maka udo na ebeRead More →
Otu ụkọchukwu ndi ụka Katọlik bụ Rev. Fr. Dọkịnta Kevin Ugoamadị, ka ndi okote-oburu, oji isi aghọ mgbọ wakporo ọgụ n’ụlọ ụka ụbọchị ụka gara aga. Ọbụ fr. Kevin bụ onye isi ụlọ ụka Sacred Heart of Jesus Parish Akwakuma na mgbago ugwu ọchịchị ime obodo Owerri na steeti Imo.Read More →